Teboka vavaka hanoherana ny lamina ankohonan'ny ratsy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny lamin'ny mpianakavy ratsy
Androany isika dia hiatrika teboka am-bavaka mifanohitra amin'ny fomban'ny fianakaviana ratsy. Ny Tompo dia te-hanafaka ny olona amin'ny fomban-drazana razana sy ny ratsy izay nametra ny fiainany tamin'ny endrika demonia manokana. Ny fianakaviana sasany dia tsy manana diplaoman'ny oniversite, ary na iza na iza manandrana manapatapaka izany zioga izany amin'ny alàlan'ny fandehanana any am-pianarana, dia hoesorina tsy ho afa-baraka izy ireo any an-tsekoly.
Any amin'ny fianakaviana hafa, tsy mahatratra taona firy ny olona. Maty izy ireo rehefa akaiky ny famantaranandro izany taona izany. Ao amin'ny fianakaviana sasany, ny momba dia momba ny andro. Andao haka sary avy ao amin'ny soratra masina. Tsy niteraka i Abrahama nandritra ny taona maro talohan'ny niterahany an'Isaka.
Toy izany koa, momba i Isaka talohan'ny niterahany an'i Jakôba. Tamin'ny andron'i Jakôba, ny vadiny malalany, Rachel, dia momba momba nandritra ny taona maro talohan'ny nisokafan'ny kibony. Ity fampitahana ity dia ohatra mazava iray amin'ny fomban'ny fianakaviana ratsy fanahy. Tsy fantatro ny lamina firafitra ao amin'ny fianakavianao, fa Andriamanitra kosa dia vonona hamotika ireo lamina ratsy rehetra mametra ny fandrosoanao amin'ny fiainana. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny lamina ratsy rehetra dia simbana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ity torolàlana am-bavaka ity dia hifantoka bebe kokoa amin'ilay Andriamanitra manimba ny ozona amin'ny taranaka mandimby. Betsaka ny fianakaviana manana razambe afrikanina izay manana ozona iray na iray hafa. Raha vantany vao mpikambana ao amin'io fianakaviana io ianao, dia ho sahirana amin'izany fanozonana izany, ary hanjary anton-javatra famerana mandra-pandringanao azy. Goliath dia singa iray nametra ny fiadiana ny tompondakan'i David. Mandra-pandresy i Goliata dia mpiandry ondry tanora hafa fotsiny i David. Mandra-pahatongan'ny fotoana nanesorana an'i Saoly Mpanjaka dia tsy maintsy mpiady lehibe iray hafa izay noheverina ho Mpanjaka i David. Andriamanitra dia manimba ny fetran'ny fetra rehetra, ny maizina rehetra; ny ozona rehetra amin'ny taranaka dia haringana amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana ho velona. Asandratra anie ny anaranao.
Tonga aho manohitra ny lalam-pianakaviana ratsy rehetra amin'ny tsy fahombiazan'ny fiainana, ny endrika ratsy rehetra izay nahatonga ny olona teo alohako ho tsy misy ilana azy. Manome lalàna aho fa tsy hitranga amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lamin'ny fianakaviana demonia rehetra amin'ny fotoana ahombiazana dia ho tapaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Manohitra ny lamina ratsy rehetra amin'ny tsy fahombiazan'ny fanambadiana aho. Ny demonia izay nanakana ny olona tao amin'ny fianakaviako tsy hanorin-tokantrano, dia manapa-kevitra aho fa tsy hanana fahefana amiko intsony amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry herin'ny tsy fahombiazana izay niatrika ny ray aman-dreniko, tonga tamin'ny alàlan'ny ran'ny zanak'ondry aho. Fa voasoratra amin'ny fanosorana ny zioga rehetra. Ny ziogan'ny tsy fahombiazan'ny ankohonana rehetra dia tapaho ny amiko, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny Tompo Andriamanitra efa nataoko eo ankavanako, ka tsy hangozohozo aho, ny razamben'ny razako rehetra dia tapaka eo alohako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga hamely ny biby ratsy rehetra notendrena hanara-maso ny fandrosoan'ny fianakaviako aho, avelao ny biby toy izany hovonoina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filalaovana ody rehetra ao amin'ny fianakaviako dia raiso amin'ny anaran'i Jesosy izao.
Izay tanimboly demonia rehetra izay nandà ny ho faty, dia avy hamely anao amin'ny anarana hafa rehetra aho, dia maty amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry mpiasan'ny fahafatesana miasa ao amin'ny fianakaviako, tonga hamely anao amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Mitsangàna, ry Tompo, ary apetraho ny akanjo sy ny fitafiana rehetra izay ampiasain'ny fahavalo mampijaly ny fianakaviako, mandoro ny akanjo na akanjo toy izany eo amin'ny fiainako ankehitriny.
Manomboka anio dia manosotra ny tenako amin'ny ran'i Jesosy sarobidy aho, ilay hosotra hanilika ahy ho amin'ny fahamboniana, ilay hosotra hanilika ahy ho amin'ny fahalehibiazana, avelao hitranga amiko amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Ny goavambe satanika rehetra ao an-tranon'ny raiko, ny lehilahy mahery rehetra ao an-tranon'ny reniko mametra ny Fahombiazan'ny olona, ​​dia may amin'ny anaran'i Jesosy dieny izao.
Mitsangàna, Tompo ô, ka aelezo ny fahavalonao. Ny lehilahy sy vehivavy rehetra tendren'ny devoly hanara-maso ny fitomboan'ny fianakaviako dia maty ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Novakiako ho tsinontsinona ny rojo ratsy rehetra nampiasain'ny fahavalo tamin'ny nitazonana ny mpianakaviko izay tsy nisy iray tamin'ny fianakaviana afaka nihoatra ny hafa. Nandoro rojo vy toy izany tamin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa manomboka anio dia lasa tsy azo sakanana aho amin'ny herin'ny maizina rehetra ao amin'ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ianareo mpiasan'ny fahantrana rehetra ao amin'ny fianakaviako izay mikasa ny hanafika ahy dia hianjera sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa izaho mitondra ny marik'i Kristy, aza misy manahirana ahy. Nandà tsy ho sahiran-tsaina aho noho ny endrika fianakaviana ratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, tiako ianao hanosotra ahy ny menaky ny fahalehibiazana, mba tsy hisy fahefana na fahefana hitantana ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, aoka ny fahasoavan'ny hatsarana ho tonga amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahasoavana izay hanokana ahy ho amin'ny fahalehibiazana dia avelao ho tonga amiko anio amin'ny tananao mahery.
Ny karazana haratsiam-pahalemen'ny fianakaviana rehetra dia tsy hanaovako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy ny soratra masina: Kristy no nitondra ny rofiko rehetra ary nahasitrana ny aretiko rehetra. Manafoana ny karazan'aretina rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Izaho dia mandray ny hery izay mamaky ny karazan-ozona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy ny soratra masina: Kristy dia efa voaozona hamonjy antsika, hofoanako amin'ny endrik'i Jesosy ny ozona rehetra amin'ny fiainako.
Tonga nanohitra ny kaontim-pianakaviana rehetra ao amin'ny razambeko aho izay nanakana ny olona. Potehiko amin'ny afon'ny Fanahy Masina izany. Ny lamina ratsy rehetra izay mahasosotra ny olona amin'ny fotoana ahombiazana, ny mpitsikilo rehetra izay mamela ny fitahian'ny olona hiala, dia aringako amin'ny afon'ny Fanahy Masina ianao.
Milaza ny soratra masina fa nanosotra an'i Jesosy Kristy Andriamanitra tamin'ny Fanahy Masina sy ny hery ary nandehandeha nanao soa. Tompoko, mivavaka aho mba hosoraninao amin'ny fanahy sy hery masina aho mba tsy hisy mpandraharaha maizina afaka hanakana ahy. Tiako hosotrao ianao mba tsy hanozona ahy na oviana na oviana, na oviana na oviana, ny mpianakavy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy.
Fomban'ny fianakaviana ratsy
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny nofy ratsy
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy
EMMANUEL Akpan Andrew 21 Novambra 2020 Amin'ny 1:40 maraina
Ry lehilahin'Andriamanitra, azafady fa lehilahy antitra 54 aho ary nijaly tamin'ny olana ara-panambadiana sy ny olana ara-bola. Tiako ianao hanampy ahy hivavaka ho an'ny zava-bitako amin'ity faritra ity. Eto ambany ny anarako sy ny Gmail azafady.
15 Ireo vavaka tokony hisian'ireo sakana tsy hita maso
Drafitra famakiana Baiboly isan'andro KJV 15 Oktobra 2018
Vavaka fangatahana milamina sy fiononana